I-St George @ Ross Castle Galway - I-Airbnb
I-St George @ Ross Castle Galway
Rosscahill, Moycullen, Galway, Ireland
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarshall
I-St George yamkela iindwendwe ezifikelela kweziyi-12 ezinamagumbi okulala ayi-2 kumgangatho osezantsi namagumbi okulala ayi-4 kumgangatho wokuqala. Elinye lamagumbi okulala amathandathu anokuba ngamawele okanye akumgangatho ophezulu ukuze ahambelane neemfuno zeendwendwe.
Iziqithi ze-Aran, ii-Cliffs of Moher, i-Ashford Castle, i-Kylemore Abbey, i-salmon/i-trout fishing, iindawo zokudlala igalufa kunye nokukhwela ihashe zezinye zezinto ezininzi ezibangel 'umdla zale ngingqi.
I-St. George yamkela iindwendwe ezifikelela kweziyi-12 ezinamagumbi okulala ayi-2 akwinqanaba lokuqala namagumbi okulala ayi-4 kwelesibini. Onke amagumbi anokulungiswa abe ziibhedi ezimbini okanye ezinkulu. Inqanaba lokuqala linetafile yeping-pong nendawo yokuhlala yeTV elungele abantwana. Inqanaba lesibini linendawo yokuhlala/yokutyela enendawo yomlilo yegesi. Onke amagumbi okuhlambela anomatshini wokomisa iinwele, iindawo zokubambelela iitawuli namanzi ashushu ashushu ngoko nangoko. Indlu esemaphandleni ikwindawo eseyadini (jonga ifoto).
Iibhedi ezinkulu eziyi-3, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-6
Iibhedi ezinkulu eziyi-3
Iintsuku eziyi-7 e Rosscahill, Moycullen
Le ndawo ijikelezwe lichibi, ihlathi kunye namasimi okulima.
Le ndawo inezindlu ezintathu. Iindwendwe zinokudibana nezinye iindwendwe ezingqonge izindlu kunye neendawo eziqhelekileyo (okt, iphuli, iigadi, igumbi leBilliards njl.njl).